Indawo yeziko lobugcisa ijolise kwi-Intelligent Electronic Ethanol kunye neMililo yeVapor.
Sigxila kulawulo lotywala kude, i-bio-ethanol fireless fireplaces kunye ne-3D fireplaces fireplaces kunye neendlela eziphambili zokwenza izinto kunye nobugcisa. Zonke iimveliso zethu zidlulile kwizatifikethi ezivunyiweyo ze-CE / FCC / IC kunye nokuthengiswa ngokuthe ngqo 100% Rhweba ngaphakathi China .
Singayilwa ngokukhululekileyo kwaye ngokulula sifakelwe abanini khaya, abayili, abayili.
Intelligent Amanzi Vapor zomlilo
Ngelangatye loMlilo waManzi oMoya, Sihleli kunye, Ukwabelana ngolonwabo kunye nempumelelo nosapho lwakho kunye namaqabane ngelixa usela iwayini ebomvu, Ukuthetha, Ukudlala, Ukuhleka ... Oko kufanelekile!!! Imodeli yobugcisa bamanzi enkungu ye-3D eyilelwe kuyilo lwangoku olunokuguquguquka ngaphakathi kunye noMlawuli okude okanye usetyenziso lweSelfowuni,Kulula ukuyifaka kunye nokuSebenza,Akukho Ngxolo,Akukho bushushu,Ukuhombisa kuphela ngaphakathi.
Uyilo olungenasiphelo lweBio Ethanol Burner
Zisa umoya osondeleyo wale ndawo intle yomlilo ekhayeni lakho kwaye wonwabele ubumnandi obucocekileyo. Ngeelangatye zeArt ethanol Fireplaces, Sihleli kunye, Ukwabelana ngolonwabo kunye nempumelelo nosapho lwakho kunye namaqabane ngelixa usela iwayini ebomvu, Ukuthetha, Ukudlala, Ukuhleka ... Oko kufanelekile!!! Ulawulo loMgangatho olungqongqo: Ngaphezu koko,Abasindisi boMgangatho ngabacebisi bokugqibela kwicandelo lokwakha kwaye kufuneka babe noxanduva lwenkqubo yonke ekuthengeni,Zonke iindawo zokucima umlilo ze-bio ethanol ziyavavanywa kwaye zipakishwe phantsi kolawulo lomgangatho olungqongqo ukuze kuqinisekiswe ukuba kusebenza ngokuchanekileyo nangokugqibeleleyo! Eyona nkonzo ilungileyo emva kokuThengiswa: Ngaphezulu kwe 8 Amava eminyaka yokubonelela ngenkqubo ezenzekelayo yeziko,Singatsho ukuba sineenjineli ezinegunya ekusombululeni iingxaki zakho 3 Iwaranti yonyaka ixesha elide.
Faka i-Ethanol Burner engenasiphelo
Nge amadangatye Art ethanol sokukhuphela, Sihleli kunye, Ukwabelana ngolonwabo kunye nempumelelo nosapho lwakho kunye namaqabane ngelixa usela iwayini ebomvu, Ukuthetha, Ukudlala, Ukuhleka ... Oko kufanelekile!!! Njengenkokeli yeNkqubo yoMlilo eNobuchule eChina,Iqela lobugcisa bendawo yomlilo Gxila kwimililo ye-ethanol ekrelekrele ngaphezulu 10 Zonke izixhobo zenziwe ngomgangatho ophezulu kunye neTekhnoloji.
Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngeZiko loMlilo? Emva koko ubhalise kwincwadana yethu.
Ulawulo lweqhosha elinye kude okanye kwifowuni yakho eyi-smart ngokudibanisa neNkqubo yakho yeKhaya eSmart.
Umlilo waManzi oMphunga ongenaMphunga AFW80
Umlilo wobugcisa ©Ilungelo lokushicilela ©2022 Onke Amalungelo Agciniwe.